Thursday June 11, 2020 - 10:16:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
24-kii saac ee lasoo dhaafay ayay dowlado iyo Ururo dhammaantood ku lug leh gummeysiga lageliyay Soomaaliya waxay soo saarayeen warsaxaafadeedyo dhammaantood bogaadinaya go'aankii aqalka sare ee ahaa in DF-ka iyo maamul goboleedyada ay yeeshaan kulan lagu go'aaminayo waqtiga doorashooyinka.
waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa markale sheegtay in ay taageersantahay kalfadhigii baarlamaanka ee buuqa dhaliyay kadib markii ay xildhibaanno mucaarad ah ku oriyeen Farmaajo xili uu jeedinayay khudbad siyaasadeed.
James Swan oo ah ergayga Q.Midoobay ee Soomaaliya ayaa la sheegay in uu cadaadisyo xooggan saarayo Farmaajo iyo Kheyre oo ku aaddan in aysan waqti kororsi sameyn karin.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in James Swan uu kulan albaabadu uxiranyihiin uu la yeeshay Fahad Yaasiin oo ah taliyaha sirdoonka dowladda, Q.Midoobay ayaa taliyaha sirdoonka ugudbisay warqad ka socota UN-ka oo DF-ka ku amraysa in doorashooyinka ay waqtigooda ku qabato.
Xukuumadda Rooble oo go'aansatay in ay qabato doorasho hal dhinac ah.
Doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka oo bilaawday.